Ikhaya elipholileyo losapho lonke
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCorrie
Ikhaya elihle elinehombiso yangoku kunye nesicwangciso somgangatho omangalisayo. Ikhitshi elikhulu elivulekileyo/indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala elitofotofo lokuhlala kulo. Ikhitshi linezinto zonke ozifunayo ukulungiselela ukutya ngexesha lokuhlala kwakho.
Indawo ilungile kufutshane ne-bypass, isibhedlele naphakathi kwedolophu kunye nendawo yokuthenga yaseKalispell emantla. Umzila webhayisekile ungaphakathi komgama wokuhamba ukusuka ekhaya kwaye ipaki ye-Sunset imalunga ne-bock esitratweni.
Eli khaya libhalisiwe kwaye linelayisensi ngokuhambelana nesixeko saseKalispell.
Isicwangciso somgangatho sibanzi kwaye sikhululekile kakhulu. Ikhitshi elikhulu elinesicwangciso somgangatho ovulekileyo kunye netafile enkulu yokutyela kunye neendawo zokuhlala esiqithini zenza ukuba kube kuhle ukupheka kunye nokuxhoma kunye ekhitshini / kwindawo yokutyela. Ingasemva enkulu yabantwana okanye imisebenzi yangaphandle kwiinyanga ezifudumeleyo.
4.94 ·Izimvo eziyi-80
Eli khaya likwindawo ezolileyo esembindini wedolophu kunye namantla eKalispell.
Kukho indlela yebhayisekile / yokuhamba kufutshane kunye nepaki yendawo ngaphaya kwesitrato kunye nezindlu ezimbalwa ukusuka ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Corrie
Mna ngokwam andihlali eFlathead Valley nangona kunjalo kukho abantu abalawula le ndlu enokuba yinkonzo. Sonke sisebenza imisebenzi esisigxina ngaphandle kolawulo lwepropathi erentwayo ngoko ke kunokubakho ukulibaziseka okuncinci kumaxesha okuphendula. Sithumele umyalezo nje nge-app kwaye siya kuhlangabezana neemfuno zakho ASAP.
Mna ngokwam andihlali eFlathead Valley nangona kunjalo kukho abantu abalawula le ndlu enokuba yinkonzo. Sonke sisebenza imisebenzi esisigxina ngaphandle kolawulo lwepropathi erentw…